Paunenge iwe wafunga kuishandisa | Ota Bunkanomori
TOKYO OTA OPERA PROJECT 2021 mhenyu kurekodha kugovera (kuchajiswa)
Ryuko Chirangaridzo Horo Kubatana Exhibition Inoenderana Zviitiko
Kune vashandisi vemumhanzi studio
Daejeon Tsika Sango Menyu
Ongororo yekutarisa / zvishandiso
Iyo danho rinotaridzika sei
Exhibition kona / mativi
Mumhanzi studio 1.2.3
Mitambo studio 1.2
Kugadzira Studio 1.2.3
Imba yekusangana / yekumirira
Ruzivo rusina chipingamupinyi
Nezve ruzivo-rusina ruzivo
Mashandisiro aungaita nekamuri
Paunenge iwe wafunga kushandisa
Maitiro ekushandisa uye kuyerera kwekushandisa>
Paunenge uchishandisa horo, yakawanda nzvimbo kamuri, yekuratidzira kamuri kona, uye plaza
Mukutaura magwaro anotevera mwedzi mumwe pamberi pekutarisira kwekushandisa zuva mushure mekuunza, ndapota enda murindiri nemisangano yakakwana.
Chirongwa kana kufambira mberi chati, mapepa, matikiti ekupinda kana matikiti akaverengerwa (semuenzaniso)
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, zviitiko zviri muhoro ndezve (XNUMX) dhizaini yekugadzirira, (XNUMX) dhizaini yekugadzirira mwenje, uye (XNUMX) acoustic yekugadzirira dhizaini.
(Kana iwe uri wakashambadzirwa kune kontrakta, ndokumbira utizivise zita rekontrakta neruzivo rwekuonana.)
Paunenge uchishandisa imba yemusangano, musangano wekugadzira, kana studio
Ndokumbirawo muzivise tafura yepamberi nezve mamiriro emukati uye zvivakwa zvinoitika mazuva maviri isati yasvika zuva rekushandisa.
Zvichienderana nezvakashandiswa, tinogona kukumbira kuti uve nemusangano nevashandi.
Kana uchitengesa zvinhu
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekutumira chakaparadzaniswa "Chikumbiro cheKubvumidzwa Kwekutengesa Zvinhu, nezvimwewo"
Zvinhu zvekutengesa tendero kunyorera
Semutemo wakajairika, zvinhu hazvigone kutengeswa kuma studio uye nenzvimbo dzakavhurika.
Kuzivisa kumahofisi ehurumende akakodzera, nezvimwe.
Zvichienderana nezviri mukati mechiitiko ichi, zvingave zvakafanira kuzivisa anotevera akakodzera mahofisi eruzhinji.
Ndokumbira utarise pamberi uye uteedzere maitiro anodiwa.
Notification zviri mukati
Kushandiswa kwemoto, nezvimwe. Omori Moto Dhipatimendi Kudzivirira Chikamu
1-32-8 Omorihigashi, Ota-ku, Tokyo Runhare: 03-3766-0119
Security nezvimwe. Omori Police Station
1-1-16 Omorinaka, Ota-ku, Tokyo Runhare: 03-3762-0110
Kubata chikafu Ota Ward Hutano Hutano Kurarama Hutsanana Chikamu Chikafu Hutsanana
1-12-1 Omorinishi, Ota-ku (6th pasi peOmori Area Hurumende Kuvaka) Runhare: 03-5764-0691
Copyright Japan Mumhanzi Copyright Association
JASRAC Tokyo Chiitiko Konzati Bazi
Nippon Hupenyu Shinjuku West Buda Kuvaka 10F Runhare: 03-5321-9881
Ndokumbira utaure zita remurongi, ruzivo rwekutaurirana, nezvimwe pamapepa, mapepa, matikiti ekupinda, nezvimwe.
Kana iwe uchida kuposita mapepa uye mapepa mumahoro, ndokumbira utizivise. (Zvishoma kune zviitiko zvakaitirwa pahotera)
Ruzivo rwezviitiko runogona kutumirwa mahara pamagazini eruzivo akaburitswa neOta Ward Cultural Promotion Association uye pawebhusaiti. (Zvichienderana nezviri mukati, tichaongorora pamberi.)
Ndokumbirawo zadza fomu rakatarwa uye riendese kumunhu anotarisira nzvimbo iyi.
XNUMX kuvaka chiitiko chirongwa peji reruzivo ruzivo kuburitsa kunyorera
Nezve manejimendi ezvivakwa
Pazuva rekushandisa, ndokumbira upe fomu yekubvumidza yekushandisa kune yekugamuchira pane yekutanga pasi usati washandisa kamuri.
Kana paitika njodzi, ndapota ita chokwadi chekutora matanho angangoita ekutungamira kwekubuda, kusangana kwekukurumidzira, uye rubatsiro rwekutanga kune vashanyi.
Pasi peMutemo Webasa reMoto, ndapota nyatsoongorora kugona kwevashanyi.Haigone kushandiswa kupfuura kugona.
Kana paitika tsaona kana chirwere, pakarepo zivisa vashandi uye uteedzere mirairo.
Ndokumbira utarise kuti hotera haina mhosva yekuba.
Mushure mekushandisa, ndokumbira mudzosere yakashandiswa inoitika michina kune yekutanga mamiriro.Uye zvakare, ndapota ita chokwadi chekutora zvinhu zvako zvekuenda nazvo kumba uye usazvisiye munzvimbo iyi.
Mukutaura, kana chivakwa kana chishandiso chakakuvara kana kurasikirwa, iwe unozodikanwa kuti ubhadhare zvakakanganiswa.
Ndokumbira utore marara ako uende nawo kana iwe uchidya kana kunwa, kana marara zvinhu zvinogadzirwa panguva yekushandisa.Kana zvichinetsa kuenda nazvo kumba, tichazviongorora kuti tibhadhare, saka ndokumbirawo utizivise.
Kana zvichidikanwa kuti utore nzvimbo yacho, mushandi anogona kupinda mukamuri rauri kushandisa.
Murongi ndiye ane basa rekuronga nekutungamira vashanyi, kubata uye kuvaraidza.Kana zvichitarisirwa kuti nhamba huru yevaenzi ichauya nguva yekuvhura isati yasvika, kana kana paine mukana wekuvhiringidzika panguva yechiitiko, ibasa remurongi kupa varongi vakakwana.
Zvichienderana nechiitiko ichi, murongi achagadzirira vashandi vemuhara, kuvhenekera, kurira, nezvimwe.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti murongi anoona zvinotevera nekuzivisa vashanyi.
Usanamatire bepa, tepi, nezvimwewo pamadziro, mbiru, mahwindo, madhoo, pasi, nezvimwewo, kana kurova nzara kana zvitanda pasina mvumo.
Usatengese kana kuratidza zvinhu, govera zvakadhindwa, kana neimwe nzira ita chero zvakafanana pasina mvumo.
Usaunze zvinhu zvine ngozi kana mhuka (kunze kwembwa dzebasa) pasina mvumo.
Usadye, kunwa kana kuputa kunze kwenzvimbo dzakatarwa.
Usaburitse vhoriyamu inogona kukanganisa manejimendi yenzvimbo kana kukonzera kusagadzikana kune vamwe.
Usakonzera kusagadzikana kune vamwe, sekuita ruzha, kupopota, kana kushandisa mhirizhonga.
Nezve kushandiswa kwekupaka
Zvekushandisa kwemukamuri uko uko kungangodaro kuve nezvinhu zvekutakura / zvekutakura, isu tichakupa yemahara yekupaka nzvimbo yekuchenesa tikiti chete pazuva rekushandisa.Ndokumbirawo mubvunze vashandi nezve makamuri anogona kugoverwa uye huwandu hwekugovera.
Nzvimbo yekupaka ine muganho wehurefu we2.8m uye muganho wekureba we5m.ziva kuti.
Uye zvakare, kune vese vatengi uye vamwe vashandisi vemakamuri, uye kana iyo nhamba yekugovera ikapfuura iyo nhamba, ichabhadharwa.
Ndokumbira upinde uchibva pamusuwo wepamberi pa1st floor pasina matanho, iwo mutserendende kumusuwo wekumashure, kana nzvimbo yekupaka paimba yepasi yepasi.Ndokumbirawo ushandise erevheta kuti usvike imba yega yega
Mawiricheya-anowanikwa mazhinji emakamuri ekuzorora (chimbuzi chemunhu chero upi zvake) anowanikwa pane yega yega chivakwa chemusangano uye muhoro (1 pasi, imba yekupfeka).
Mawiricheya emaroja anowanikwawo muchivako, saka ndokumbirawo utizivise kana uchida.
* Kunyorera / kubhadhara kune yega yega nzvimbo yekuvakira 9: 00-19: 00
* Kuchengeterwa Tiketi / kubhadhara 10: 00-19: 00
Kupera kwegore uye Mahoridhe egore Idzva (Zvita 12-Ndira 29)
Nguva yekuchengetedza / yekuongorora / yekuchenesa yakavharwa / yenguva pfupi yakavharwa